Akụkọ - Akụkọ nke mbụ Gịnị bụ njirimara nke njikọ njikọta ụwa niile?
Njikọ ụwa ọnụ na-eji njirimara nke usoro ya
torque na ije nwere ike reliably ebute site ná. Njirimara nke njikọta ụwa niile bụ: ihe owuwu ahụ nwere akụkụ dị iche iche na-abanye, na akwara abụọ ahụ gụnyere akụkụ nke njikọta ụwa niile dị iche, n'ozuzu n'etiti 5 Celsius -45 Celsius.
Universal nkwonkwo njikọ ojiji
Na nnyefe ike dị elu ma na-arụsi ike ike, ụfọdụ njikọ nwere ihe nchekwa, na n'okpuru ọnọdụ nke damping, a na-eme ha ka ha na-atụgharị ọnụ iji nyefee akụkụ igwe nke mgbanwe mgbanwe. Ma melite ike arụmọrụ nke shafting. Ejikọtara njikọ ahụ nke abụọ halves, nke a na-ejikọtara ya na ọdụ ụgbọ na nke a na-ebugharị. N'ozuzu, igwe ọrụ ike na-ejikarị njikọ na igwe ọrụ.
E nwere ụfọdụ ụdị nke njikọta njikọ ụwa niile
Njikọ ahụ nwere njikọ abụọ ejikọtara. N'ihi nrụpụta nrụpụta na nrụnye, nrụrụ post na mgbanwe okpomọkụ, ọnọdụ dị nso nke akụ abụọ ahụ ga-agbanwe, na nhazi oge anaghị ekwekarị nkwa. Akụkụ, ma ọ nwere ikike ịkwụ ụgwọ maka mwepụ dị iche iche nke ikwu, ya bụ, ma ọ nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ njikọ yana ebumnuche nke njikọta n'okpuru ọnọdụ nke mwepụ nke ikwu. Enwere ike ịkekọrịta njikọ abụọ n'ime njikọta siri ike, njikọ na-agbanwe agbanwe na njikọ njikọ. Typesdị ụdị njikọ dị iche iche, njirimara na ọrụ ha na ngalaba nke ikwu okwu na sistemụ nnyefe
Isii njikọ nwere ike na-ebunye ngagharị na torulu na-enweghị ọrụ ndị ọzọ, gụnyere bidirectional njikọ, uwe njikọ, mwekota njikọ, wdg
Mgbanwe na-agbanwe agbanwe Mgbanwe na-agbanwe agbanwe na-enweghị ihe na-agbanwe agbanwe nwere ike ọ bụghị naanị na-ebugharị ngagharị na ọnụọgụ, mana nwekwara ọkwa dịgasị iche nke iwebata. Ọrụ radial na angular na-akwụ ụgwọ na-agụnye njikọ njikọta, njikọta ụwa niile, njikọta Chain, njikọ mmịfe njikọ, njikọ diaphragm, wdg.
Mgbanwe ahụ na-agbanwe agbanwe na ihe na-agbanwe nwere ike ibunye ngagharị na ọnya; ọ nwere dị iche iche degrees nke iwebata, radial na angular akwụ ụgwọ arụmọrụ; o nwekwara ogo dị iche iche nke nbibi vibering na nkwụsị, na-eme ka arụmọrụ ọrụ nke usoro nnyefe dị iche iche gụnyere njikọ dị iche iche na-agbanwe agbanwe na ihe ndị na-abụghị nke igwe na-agbanwe na njikọta na-agbanwe agbanwe. Ọdịdị nke njikọta njikọta dị iche iche dị iche iche, mmuta ahụ dị iche, ọrụ ya na usoro nnyefe dịkwa iche.
Mgbanwe nchebe na-agbanwe agbanwe na-enwekwa ọkwa dị iche iche nke ịrụ ọrụ ụgwọ, gụnyere ụdị ntụtụ, ụdị esemokwu, ụdị ntụ magnet, ụdị centrifugal, ụdị hydraulic na njikọta nchekwa ndị ọzọ.
Udi na uzo nke mkpochapu nke uzo abuo a. Mgbe o siri ike ịnọgide na-enwe nlezianya na nkenke nhazi nke ogwe abụọ ahụ mgbe echichi na ngbanwe, ma ọ bụ mgbe ogwe abụọ ahụ ga-egbochi mwepụ ndị ọzọ metụtara n'oge ọrụ ọrụ, a ga-edochi njikọ njikọta. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ngbanwe nke radial dị na axial axial, enwere ike ịhọrọ njikọ mmịfe ahụ, na mwepu nkuku nke na-abanye ma ọ bụ na-agbagọ oghere abụọ nwere ike jikọta ya na njikọta ụwa.
Relitụkwasị obi na gburugburu ebe ọrụ nke njikọ. Njikọ ndị na-achọghị mmanu mmanu na-abụkarị ihe ndị mejupụtara ma bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karị; njikọ na-achọ mmanu na-enwe mmetụta dị nfe nke ogo mmanu mmanu ma nwee ike imetọ gburugburu ebe obibi. Njikọ ndị nwere ihe ndị na-abụghị nke dị ka rọba na-emetụta ọnọdụ okpomọkụ, mgbasa ozi na-emebi emebi na ọkụ siri ike, ma na-aka nká.
N'ihi ihe ndị dị ka ịmepụta, ntinye, nrụrụ ibu na mgbanwe okpomọkụ, ọ na-esiri ike ijigide nghazi nke ziri ezi nke ogwe abụọ ahụ mgbe echichi na nhazi. E nwere otu ebe a na-ewepụ ebe obibi na ụzọ x na Y na ntụgharị ntụgharị CI. Mgbe ngbanwe nke radial dị ukwuu, ihe mmịfe njikọ ahụ bụ nhọrọ, yana mwepu nkuku nke na-abanye ma ọ bụ na-agbakwụnye oghere abụọ nwere ike jikọọ na njikọta ụwa. Mgbe ogwe abụọ ahụ mepụtara ebe ọzọ agbakwunyere n'ihi nnyonye anya n'oge usoro ọrụ ahụ, a ga-ahọrọ njikọta na-agbanwe agbanwe.